About Us - Jution silikoon & Rubber (DongGuan) Co., Ltd
Jution silikoon & Rubber (DongGuan) Co., Ltd waa saaraha a Professional takhasusay horumarinta iyo soo saaridda alaabooyin silicone, aad loogu isticmaalaa in kushiinka iyo Housewares. Waxaa la aasaasay sannadkii 2005, oo ku yaalla "ayuu Factory oo ka mid ah aduunka" --DongGuan City. Factory daboolayaa meel ka mid ah in ka badan 8,000 oo mitir oo laba jibbaaran, in ka badan 150 ka shaqeeya xirfad leh. Waxa uu maray SA8000 2014, ISO9001: 2015, ISO14001 2014; oo aan helay ee " High iyo Technology New Enterprise " DALKA 2016.
Haddaba warshad waxaa ka koobnaa koox adag injineernimada Design; a workshops saarka caaryada sax, Post-sameynta waaxda; waaxda QC, waaxda baakada. Iyadoo 3 nooc oo xarumaha machining CNC sare iyo 3 nooc oo mashiinka dhimbiil EDM for tooling; 30 nooc oo mashiinka Post-sameynta soo saarka leh, in ka badan 10 Daabacaadda & line bifbaafka, sidoo kale leedahay aqoon isweydaarsi weyn oo Boorka-free xirxirida.
Iyada oo xoog weyn iyo adeegga macaamiisha ka sarreeya, waxaan sameeyo kormeerka ee alaabta oo dhan, oo tayo leh ayaa wax ku ool ah la ilaaliyo. Waxaan la qorsheeyo karo iyo waxyaabaha soo saaridda sida codsiga macaamiisha. Cuntooyinkan waxaa lagu iibin in ka badan 30 dal iyo gobollada, la Disney, Coca-Cola, Nestlé, Marlboro, Line Saaxiibada, Daiso, Hello-Kitty, L'OCCITANE iyo macaamiisha kale caalami ahaan caan.
Warshadda ayaa had iyo jeer ahaa ruuxa "tayada ugu horeysay, macaamiisha ugu horeysay, horumar joogto ah" Mabda '. Daacadnimo siinta alaabta Heerka sare iyo adeeg lagu qanci karo in macaamiisha. Shirkadda adag u aaminsan yihiin in la xoog, iskaashi daacad ah iyo ruuxa horumar joogto ah, si loo hubiyo in macaamiisha ku raaxaysan karaan sahayda joogto ah, hubinta tayada iyo bixinta wakhti.